Ukuguqulwa kweMalimboleko - Izakhiwo Nezindlu ze-NJ & NY, i-Selectate, Defence Defence ne-Bankruptcy
Ikhaya / Ukushintshwa kwemalimboleko
Ukulungiswa kwemalimboleko kuguqula imigomo ye ekhona Mboleko. Lokhu akuyona ukuphinda unike amandla. Umgomo ukwenza ukukhokha kube okungabizi kakhulu noma ukuvumela obolekayo oshiye imali yakhe ebambekile. Uma usengozini eseduze yokulahlekelwa yikhaya lakho ekuvezweni, kungcono ukuqala inqubo ngokushesha okukhulu. Amagama avame ukuguqulwa yisilinganiso senzalo futhi kwesinye isikhathi ubude bemalimboleko. Ukuxolelwa kwezikweletu akuvame ukunikezwa ukulungisa imali obanjelwe kuyo.
Qiniseka ukuthi usebenzisa umthombo othembekile wokulungiswa kwemalimboleko yakho nokuthi bagunyaziwe ukuguqula imalimboleko yakho. Uma bengakwazi ukukutshela ukuthi uzokwazi yini noma cha ngaphambi kokufaka amaphepha akho kungenzeka ukuthi abakufanelekeli ukwenza ukuguqulwa kwakho. Kufanele bakwazi ukuchaza isilinganiso sakho sokungena esikweletini nokuthi lokho kusho ukuthini amathuba okuguqulwa. Uma ungenzi imali eyanele ukukhokha imali obambise ngayo, khuluma nommeli ukuze wenze konke ongakukhetha.
Qaphela ama-Loan Modifying Scams e-NJ
Isimo se-NJ sinalo ikhasi lewebhu elihlobene Isexwayiso Mayelana nomsebenzi wokuguqulwa kwemalimboleko wemalimboleko .
ENew Jersey ibhizinisi lidinga ukubhaliswa njenge-Adjuster yesikweletu ngaphansi kwesenzo se-NJ Debt adjuster noma inhlangano exempt.
Ummeli walomthetho lo Mbuso ongabandakanywa ngokuyinhloko njengesiphikisi sesikweletu;
Umuntu osebenza njalo, osebenza ngokugcwele wesikweletu, futhi osebenza njengesiphikiso sezikweletu zomqashi wakhe;
Umuntu osebenza ngokulandela noma imuphi umyalo noma isinqumo senkantolo, noma elandela igunya eligunyazwe yinoma yimuphi umthetho waleli Zwe noma laseMelika;
Umuntu obolekisa okweletayo, noma umenzeli womkweletisi oyedwa noma abaningi obolekayo, futhi izinsizakalo zakhe zokulungisa izikweletu zakhe unikezwa ngaphandle kwenkokhiso kulowo okweletwayo; noma
Umuntu othi, eceliwe okweletwayo, ahlelele noma enze imalimboleko kulowo obolekayo, futhi okuthi, lapho kugunyazwa okweletayo, asebenze njengesiphikiso sezikweletu somkweletisi lapho ekhipha imali ebolekiwe, ngaphandle isinxephezelo ngezinsizakalo ezinikezwe ukulungisa lezo zikweletu.
Uma umuntu ocela ukuguqula imalimboleko yakho angawi kulezi zigaba ezingenhla, kungenzeka ukuthi uhlukunyezwa eNew Jersey.
Qaphela ama-Loan Modifying Scams e-NY
ENew York, Ummeli Jikelele une Ifomu Lesikhalazo Sokubolekwa Kwemali Ebolekisiwe.
Kusukela i-2009, umphathi-jikelele waseNew York ubelokhu ephenya Isimo Sokuhlenga Ukusinda. Uma unomuzwa wokuthi awukhokhiswa mali, qaphela.